MUUQAAL: Wasiir Bayle Iyo Jawaabta Ganacstada Gobolka Banaadir uu siiyey | Kalshaale
MUUQAAL: Wasiir Bayle Iyo Jawaabta Ganacstada Gobolka Banaadir uu siiyey
Feb 12, 2018 - 38 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Wasiirka Maaliyada Xukuumada Federaalka Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle oo ka jawaabay cabashada ka timid Ganacsatada Gobolka Banaadir.
Wasiirka ayaa faah-faahin wuxuu ka bixiyey Cashuuraha kala duwan ee ay Dawladdu qaadayso, Wuxuuna soo bandhigay Arimo muhiim ah oo Bulshada inteeda badan aysan la socon.
Jaale wasiir Bayle, cadaalad darrada inta joojisid, sheeg xaqa, si Somaliya horay uGu socota. Sheeg in eey qalad tahay, in Mogadisho kaliya eey dowladda dhexe xukunkto, gobolada kale ee dalkana eey qabiilo xukumaan.
Waa maxay, dowlad? Dowlad waa wax isku darsasho, iyo representation by contribution. Hadii taas la’eegayana, waa in aanan waxba laga weeydin aayahada dalka, qabiilada iyo gobolada aanan waxba kusoo kordhin dowladda. Hadii aan taas lasameeyneeynin, waa in loo daayaa maamulka gobolka Banaadir in uu maamulo canshuurta dakadda Mogadisho, iyo airport Mogadisho, iyo guryaha iyo shirkadaha iyo hotaalada Mogadisho.
Adinka dowladda dhexe ahna, ku noolaada waxa aad aduunka kaso baridaan/tuugsataan.
Laakiin, xaq maahan, waana dariiq qaldan in dowladda dhisida aan rabna in aan Somaliya ka sameeyno, in aasaas cadaalad darro ah, lagu bilaabo.
Canshuurta qaad. Nina ha uga hibaysan. Ninkii diida, yaan loo oggolaan, hal shay inuu kala soo dego. Weliba waa in xarig loogu daraa..war waa dad fowdo iyo nidaam la’aan bartay…dekedda dowlad baa dhistay…iyadaana maamulaysa….cidda oran oranaysa dowladdaan waxeedii iyo shaqadeedii kuqabsanayaa…laga yeeli maayo..dadkaan waa in sharciga la dhadhansiiyaa…isuga intaan soo qalabqaadanayo….haddaan jeel lagu urin…xaarantiina la iska soo cunqaacin….War ninkii astaamihii General Maxamed Geelle Yusuf oo kale lahow isa sii diyaari….kkkkkk…. Somaali waa baqdaaye ma xishootee..
Cadaado salaan sare mudane
Hadalka inta muhiimka ah adigaa dhameeyay dowladdu maheyso mana maamusho meel aan xamar aheyn dadku wey ogol yihiin in ay canshuurta baxshaan laakiin su.aashu waxa waaye maxaa loo ogol yahay?
Shacabka somaliyeed ma u ogyihiin in ay yihiin dadka kaliya ee canshuurta dowladda laga qaado xaqna aan laheyn in ay yihiin?
Dowladdu muku baraarugsan tahay in ay dowlad u tahay Somali oo dhan?
Ma xaqbeey u leeyihiin in iyagoo kaligood dowladda canshuur siinaayay hadana la duldhigo canshuur saa. Id ah?
Wariir Bayle wuxu necenyahay in la waydiiyo su aal ah,aaway cashuurtii Bosaso iyo Kismaayo kkk
Formaajana wuxu necebyahay in la waydiiyo Qalbi dhagax kk
Garqaad, waan kusalaamay brother,
Ma’aragtaa ninkaan Dusha, ee Majeerteen sida uu u leeyahay Dr. Baylow, noo soo dhac dadka Somaliyeed ee Mogadisho kunool canshuurtooda, teena dakadda Boosaasana canshuur kama siineeyno dowladda dhexe?
kkkkkk, lax kasta, meesha eey is dhigto ayaa lagu gowracaa sow lama dhihi jirrin? Dadka Mogadisho kunool, daanyeertii horboodi jirtay meesha eey dhigeen ayaa lagu qalayaa. Umana jeedo, dadkii si rasmi ah, miiska ugu garaaci lahaa dowladda dhexe, ee golayaasha dowladda dhexdeeda, iyo mdadaxda dowladda dhexe hortooda si karti iyo geesinimo ah u sheegi lahaa, iyada oo aanan caqli daanyeerniamda fowadda ee doqonimada ah ee Cabdirahmaan Cabdishakuur Gacayte iyo kuwa lamidka ah eeysan dadka horboodeeynin.
Aawaya daanyeeradii xildhibaanada u ahaa Moagadisho, iyo wasiirada dowladdadda dhexe ugu jirra? Ma waxeey kadoorteen shaqada xun ee been beenta ah ee wasiir iyo xildhibaan si eey u xajistaan in eeysan ka hadlin waxa u dan ah dadka Somaliyeed iyo dadka Mogadisho, oo isku mid ah danahooda? Taas oo ah cadaalad, iyo dowladnimo.
Kama joojineeyno wasiir Bayle su’aalahaas, ilaa uu runta sheego, ciduu doona suulasha ha’uga istaagee.
Waan ognahay in uu nin muhiim u ah dalka Somaliya yahay, uuna istaahilo in uu madaxweeyne noqda, laakiin, “test” imtixaan” ayeey arrrinkaan u tahay. Gacantii Ilaaheey ayaa meesha kujirta.
Madaxweeyne Farmaajo iyo arrinka ninkaan nalagu wareeriyay ee Qalbidhagax, waxaan u arkaa in uu madaxweeeynaha fulaynimo darted uu muddo dheer uga aamusnaa arrinkaan. Qofka hogaamiyaha ah, waa in uu hadii eeysan wax u qarsaneeyn, uu marwalba runta sheegaa, isaga oo aanan ka leexleexaneeyn waajibka saran.
Waxaa yaab leh, dad kumaankun oo qof caqli xumadadooda iyo daanyeernimadooda eey u dhinteen, eey u doodaan hal nin. Hadde waa dad kuwii kuqabiilka ahaa baabi’iyay? Taasi waa daanyeernimo.
Dadka qaar aan wax laga qorin ayaa jiro dadka kala baro
Dusha waa ninkii lahaa turkiga waxaan ka dacweeyay safaarada mareykanka si ay cawinaada uga joojiyaan muqdisho
Marka waa nin xogaa sida wax loo qoro bartay laakiin naftiisa ayuu cadow ku yahay mana ogo marka hoow bixin wuxuu ka mid yahay dadka aan masuulka ka nahay ilaahey ka sokoow
asc .walla wayn oo dhan waxay baratay kalmada ah dalmida kkkkk. xagay ku arkeen dalka midka ah mise waa ducaysanayaan illeen wax mid ihi ma jiree . ka daaya adeer nafta beenta . galmudug jubaland babland hirshabeel iyo labo raadland bal halka ay joogaan dal midi noo sheega waar adeer golaa ka daaya cantarabaqashta hadii kalle aan idiinka guuroo wbt soo soco
sheega dee halka aad ku aragteen dal midaa ma beenta iyo borobogaandada ayaad illaa waligiin ku nolaandontaan car sheega dalka midka ah ee aad ku walateen
Dusha waa daanyeer kunool inkiraad. Wadna malahan, uu ku dhaho, waxaan iyo waxaan ayeey reerkeeyga kuga hogaamiya ku qaldanyahiin. Laakiin, maxaad ka rabtaa, isaga iyo kuwa badan oo buugaag aqriyay, oo waraago gaalo iyo muslin u qorra, waxuu Ilaaheey ku imtixaanayaa dad aanan dhageeysan war laqoro, iyo dacaaayad la faafiyo, naftana qiimo ugu fadhin.
Qalinka kama xoog badna seefta marka laga hadlaya Somaliya. Dusha iyo hogaamiyahiisa calool buur Abdiwali Gaas ma’oga taas.
Meelaha kale dugaag ayaaa ku nool.wax faaiido ah kuma soo kordhiyaan Somaliya.Aan ahayn sharaf dhaca Somaliyeed.Waxa ay Muqdisho goaansadaan ay noqonaysaa Somaliya.Dalmida
kkkk. waryadhaheen nimankaa reer xamar cid ka riwaayad badan toloow ma arkidonaaa
sida aad dhahday waan ku duceeysaneeynaa dalmida, waana dalka aan dooneeyno.
Laakiin, adinka iyo Majeerteen ayaa ka naxa dalmida. Bal kalmadaan uu soo alifay aqoonyahan Mr. BaHaL maxeey tahay dhibka eey kugu heeyso, balo. Soo soco.
Dalmida, oo waliba markale dalmida, haddan bom and bom. Mama Malyuun ayaa yaabtay
waqooyi iyo somaliland ayaa mid ah waxa kalle waa tafaraaruq iyo faramagooge midba dhinac u jeedoo
kkkk. horta salaan sare
midakale qolodaa bubtland waa masakiin
anigana ha i dhinac dhigin oo macnaheedu yahay annigu waxan haystaa dal iyo dad dhamaan waxii la odhanjiray somaliland
midakalle reer buntland waxanu ku samaynay dhamaan waa ku cebaysanyiin reer koonfur ?kkkk. waar ninyaw axmaqsanidaa nimanka maxaad wax uga celin waydeen mise idinkaaba gabanaayay kkkk. yacnii illaahaw somaliland i dhinac mariy sidaas ayaaba is ka daynay in aanu qaawino magaladan xunta ah ee garoowe wbt soo soco
kkkk. magaladan xunta ah ee garoowe
kaalay difaac xataa soo kaxayso waxii daayeer joogay koonfur waar illeen boqortooyo in la difaaco moyee iyaduu soo rogonmaysoo qoriga wbt soo soco land of bunt
kkkk. kuye bom oo hadana bom
waa araweelodii waalayd ee fc.buga ka qaylin jirtay waaba xadaariyad . hadii aan wax sheegi lahaana imikuu duqii axmed labo raad odhonayaa waxbaad cayday yacni waxba sheegimayee waa is ka amusaa
oo maxaa anigana i dhigay meesha
habeen wanaagsan bye
waar bal raali ahaada waxii dhibsaday qoraal.kayga hadii kallena soo socda
Waan kusalaamay. Ilama ahan in aan difaacayo Garoowe, ee bal orda adinka Isaaq iyo Majeerteen is dagaala. Sheekadaas ayaad noo dhigeeysaan, waxaad tahini labadda qabiil ee u heshiiyay Somaliya in dowladnimadedda la burburiya. Xataa heshiis waxaad ku tahiin, nimankaas daraawiisheed in eeysan Majeerteenka u gurman, eeyna taageerin. Waxyaabo kale oo badan oo aan ogahay ayaad heshiis ku tahiin. Bom oo hadana bom, Maama Malyuun, noolow kkkkk
Cadaado xamar waa laas miney laas tahay waa dul rorogtaa kkkkkkkkkkkk
Asc war RER muqdisho dhiig qaboba waxa layiri maamul masameysan karaan haye beydhahen Hadane cashuur xad Ka bax ah keena so xaq ulahan inay lamid NOQDAAN gobalada kale oon cashuur Ka qaadani dowlada dhexe ayaga iskoda isumaamulo gobalka baanadir maamuldhist canshuurtina diida idinka isku kaba dowlada C anshuur haka keemta dekadaha dalka odhan intas WAX dhafsiisan waa dulmi IYO xaraan dalmida
Rooble haddaad ii bixisay LABA RAADLE MAXAAD ila wadaajisey cid kale?. DALMIDA (ha caroon MAYA haddaa donto xanaaq). WBT
YARIISOOW BAA YAABAY!!
Ninka diida inuu la shaqeeyo, ama wax ku aamino: Dr. Beyle, PM Khayre, iyo madaxweyne Farmaajo, ha sugo kuwo ka aaminsan, amase ka hoggaamin fiican. Toloow immisay ku qaadan doontaa inuu helo…..
Waar NINOOW anigu waxaan ka mid ahay dadka kugu wareeray, macnaha ma Soomalia Mise Somaliland Mise DDS kolayba Djibouti ma tihide!!
Dhaktar Bayle Waa Nin Somalilander ah… Hadii Aad Lashaqayn Waydaan Dalkisii Hooyo Ee Somaliland Buu Iska Iman Sidii Kudhacday PRO AHMED ISMAIL SAMATAR!!
HELLO QADAADWEEYN MAYLASOCTAAN!!
GOD BLESS SHANTA SOOMAALIYEED!
Rooble, horta adeer Somaliya haddaad maqasho WAA Ummadda Koofur ama Wanlaweyn. Waxaa marag kugu filan reer Koofur xuduud ma leh oo min OBOQ ilaa Ras kiamboni way ka hadlaan oo ma aaminsana inlaga leeyahay. Reer Waqooyi anoon kala reebin Isaq, Dhulbahante, Gadabuursi (Mr BaHaL ka reeb), Warsangeli & Ciise, reer Koofur waxay u haystaan Quruun kale oo Ceelbuur hadday xiisadi ka dhalato MA fara gashadaan oo kama faalloodaan BALSE hadday wax ka dhacaan BULLAXAAR bal kaalay adigu Dabar Cadaado kalsooniduu isku qabo & aaminkuu ku qabo inaan cidina ka xigin. WAR Rooble, Rag ka roon Farxiyo, Jaamac, Khaatumo Hanoolaato, sOmalilander MA BEENTAYBA? “Axmaar Tafarre Xayle Laalays isagu tiro ma galo”. DALMIDA. WBT
Wasiir Beyle waxey aheyd inuu isticmaalo erey sax ah ” Qabri Qorisaar maahane Qori ka qaad “” ee reer Mogadishow iga daaya su’aashaas saxdaa.
@ Mr BaHal
Bayle ma jecla canshuur ka keen reer Qurac
Farmaajana ma jecla Qalbi-Dhagax ka soo celi Axmaaro.
Horta Magaca Iska Badal Soomalinimada Nina Kama Xigtide , Aanigaaba sOmalilander sita Oo Kaaga Dhoow Soomalinimadee.
Adigu Waxaad La Baxday BUDHLAYN , JUBBALAND,HIRSHABEELEE, GALMUDUG,BANAADIRLAND.
Dee Bal Adigu Meesha Magacan SOOMALI Eed Ku QULUWALAYSANYSO Kuugu Qoran Yahay Noosheeg!!
CABDI MAALIK MUUSE COLDOON YAA QUUSTAY!!
Dabshid salaan sare eboow
Dhib majiro Mr beyle waan hubaa in uu jeclaan lahaa in uu canshuurta si cadaalad ah wadanka uga wada qaado laakiin dani keentay in uu xamar kaliya ka qaado madaama uusan tegi karin kismaayo bosaaso hiirshabeele
Waan hubaa in uu reer muqdisho uga kalsoon yahay meelaha kale
Waan hubaa in uu abaal uga haayo canshuurta ay bixiyaan iyagoo kujiro xaalada adag
Reer muqdisho waa in ay dulqataan waa in ay ogadaan somaliya in ay iyaga tahay dhibka waa laga bixi donaa waxaa la gaari donaa maalin ay shacabka somaliyeed qiimeyn donaan dadkii lagu soo mooday markeey xaaladu xumeyd
Canshuurta somaliya weligeedba wexey xamar iyo dhulka wobiyada
Wadankaan yaa kala qaybiyey oo federal nookeenay? Markii federal la bartay oo lagu liibaanay yaa diidan hadana?
Aduunka daawo kasta waxay leedahay wax layiraado ” side effect” oo ah in waxay daawada kuu tartay in xanuunka kale kuu keento, sida daawada cancerka oo cancerka kaa caawin laakiin xitaa timaha kaa xiirmin oo daal sariirta ka kici karin.
Canshuurtii Boosaaso iyo malaygii Puntland, dekedii Berbera iyo Kismaayo meeday? Dadkii Isaaq iyo Harti meeye?
Federal Hawiye ayaa noo keenay maantana ayaga ka qaylinaya!
Dad nidaam iyo horumar, dowlad iyo Lacag helay iska daadiya oo Xamar ka amar qaata? No way!
Waa in laga fekeraa! Meesha joogno xagee uga dhaqaaqnaa?
Ha biqlayso Jugle ayaa oran jiray?
Shacabka reer Puntland, waxaa ilaa imminka amnigooda ilaaliya oo ka masuula waa dowladda Puntland. Dowlad federal ma ilaaliso amniga shacabka Puntland. Sidaa awgeed ayey shacabka Puntland canshuurta u siiyaan maamulka Puntland ee amnigooda ka masuulkaa.
Si taas la mida amniga shacabka Xamar waxaa ilaaliya oo ka masuula dowladda federaalkaa. Marka waa waajib in shacabka Xamar ay canshuurta siiyaan maamulka amnigooda sugaya. Ninka diida in maamulka amnigiisa sugaya inuu canshuurta siiyo, dee ninkaas waa nin isku hallayn qaba….macnaha cid kale amnigiisa u wakaashay…..
Dalka Puntland waxaa Amnigooda ilaaliyo Dowladda Puntland kuye,
Dalka Galmudug waxaa Amnigooda ilaaliyo Dowladda Galmudug.
Jufo Dowlad Sheegan oo hadana ayagu iska ilaaliyo Farahooda gacanta bidix iyo midig oo waliba sheegi iney sifiican isaga ilaaliyeen shantooda farood MA ARAGTEEN.
Ma waxaad ku dhibtey Maxaad ku soo biirey dowladd- oo waxaad rabtaa inaad dhahdo Canshuurtii Huurigii Boosaaso anigaa dib u ciney oo kama badna Waariyashaasha
, Max’ed Siyaadba waligiis canshuur kama qaadin Qurac iyo Dudun.
Ninkii Awrtable ayaan kahayaa Soomaaliya waxaan ku soo kordhiney Geed Meygaag ah- wuxuu ka xishoodey inuu dhaho markaas ayaan u xanaaqsanahey nin Jeebkiis.
Nin la dhahaayo Xabad galey ah ku dhextuuro dhiri buuxo oo diidahayo ayaa i dhibee ee waan ogahey kistu ineysan ka badneyn Duulimaadka Mr Gaas.
There will be no INTRUDERS!!